Explain syntax? - MYSTERY ZILLION
$flight_number = $val->results->flight_number;
I know about ( $val->results ).
အပေါ်က code ကို ကြည့်ပြီး နားလည်သလို ပြောကြည့်ပါမယ်။
$val က object ဖြစ်ပါတယ်
$val->results က $val object ထဲက property ဖြစ်တဲ့ results ကို လှမ်းခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ results property က array type ဖြစ်ပါတယ်
$val object ထဲက results property ရဲ့ array elements တွေဟာလည်း object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် results array element ရဲ့0index (results) ထဲက property ဖြစ်တဲ့ flight_number ကို လှမ်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်